Willkii labaad ee Somali-American ah oo lagu dilay Dagaalka Dalka Syria | Willkii labaad ee Somali-American ah oo lagu dilay Dagaalka Dalka Syria – Latest News
« Kismaayo oo diyaar garoow loogu jiro soo dhaweynta Barre Hiiraale
DAAWO VIDEO :Xafladii Soo Dhaweenta SAAXO iyo Wasiir Cali X Warsame Ee… »
Willkii labaad ee Somali-American ah oo lagu dilay Dagaalka Dalka Syria
Warbaahinta Caalamka ayaa baahisay in Dagaalada ka socda Dalka Syria uu ku geeriyooday Ruuxii labaad ee Somali-Mareykan ah.
Warbaahintu waxa ay sheegtay in Ruuxaasi uu geeriyooday isagoo u dagaalamaya Kooxda Meylka adag ee uu Magacooda ku caanbaxay ISIS kana dagaalanta dalalka Ciraaq iyo Suuriya.
Warbaahinta ayaa waxa ay Magaca marxuumkaasi Jihaadiistaha ah ku sheegtay C/raxmaan Muxumed oo ah Somali-American, waxaana la Tilmaamay in yaraantiisa uu ku koray Magaalada Minneapolis ee Gobolka Minnesota oo ay ku noolyihiin Soomaalida.
Geerida C/raxmaan Muxumed, ayaa waxaa baahiyay Telefishinka KMSP oo xaruntiisu tahay Minneapolis, waxa uuna TV-ga sheegay in Jihaadiistaha lagu dilay isla dagaalkii lagu dilay Douglas McAuthur McCain oo magaalada Minneapolis ku koray, balse noloshiisa inta badan ku qaatay San Diego.
Dhanka kale, Sirdoonka Minnesota ayaa sheegay in Jihaadiiste C/raxmaan Muxumed uu kamid ahaa dhalinyaro farabadan oo ay dabagal adag ku hayeen isaga iyo Tobaneeyo kale, waxa ayna Tilmaameen in Kiisas farabadan oo la xiriira Arrimaha Jihaadka ku hayaan.